Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को तयारी तीब्र – Emountain TV
आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को तयारी तीब्र
काठमाडौ, २७ पुस । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आगामी माघ २५ गतेबाट नामवियामा हुने आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को तयारीमा छन् । प्रारम्भिक चरणमा छनोट भएका २१ खेलाडी लिएर प्रशिक्षक जगत टमाटा तयारीमा लागेका हुन् ।
एकातिर आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, अर्कोतिर क्यानको विवादका बाबजुत तयारीमा लागेका खेलाडीहरु लिगमा छानिने बलियो विश्वासका साथ तयारीमा लागेका छन् ।
युएई, नामिविया र केन्यासहित नेपाल विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपबाट शीर्ष चारमा पर्न नसकेपछि डिभिजन–२ मा घटुवा भएका टोली हुन् भने क्यानडा र ओमान डिभिजन–३ बाट बढुवा भएका टोली हुन् ।
डिभिजन–२ बाट शीर्ष दुई टोली छनोट भएसँगै एकदिवसीय विश्वकप छनोट खेल्ने १० टोलीको टुंगो लाग्नेछ । यसपटक राष्ट्रिय टोली र अन्डर १९ टोलीबाट छानिएका उत्कृष्ट खेलाडीहरु डिभिजन लिग २ खेल्दैछन् । त्यसैले यसपटक छनौट हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् प्रशिक्षक जगत टमाटा ।
नेपालका लागि यो खेल हार र जितमा मात्रै सीमित छैन । डिभिजन लिगको यो खेलले नेपाली क्रिकेटको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले पनि यसपटक खेलाडीहरु जसरी पनि जित्नैपर्ने दबाबमा छन् । नेपालका कप्तान पारस खड्काले नामिवियाको कन्डिसन मध्यनगर गर्दै प्रशिक्षणमा फास्ट बलरहरु धेरै लिएर तयारी भइरहेको बताए ।
क्रिकेटरमा देखिएको यस्तो उत्साह क्यान विवाद र राज्यले खेल क्षेत्रलाई दिएको कम महत्वतिर मोडिदा भने निराशामा परिणत हुने गरेको छ । नेपाली क्रिकेटको भविष्य नै संकटमा परेको यो अवस्थालाई सहज बनाउन खेलाडीकै काँध भारी छ । त्यसैले पनि डिभिजन लिग २ का लागि खेलाडीहरु दत्तचित्त भएर तयारी गरिरहेका छन् ।
खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने सवालमा राज्य अत्यन्तै उदाशीन देखिएपनि खेलाडीकै भरमा अहिलेसम्म यो क्षेत्र टिकेको छ । डिभिजन लिग २ मा छनोट भएर नेपाली क्रिकेटको भविष्य संकटमा पर्नबाट जोगाउने खेलाडीको प्रयास सफल रहोस् ।